Akụkụ nke cell: njirimara na ọrụ | Green Renewables
Anyị maara na cell bụ isi ọrụ nke anụ ahụ niile dị na anụmanụ na osisi. N'okwu a, a na-ewere anụmanụ dị ka ihe dị iche iche dị iche iche, ya mere ha nwere ihe karịrị otu cell. Ụdị sel nke ọ na-enwekarị bụ sel eukaryotic ma e ji mara ya site n'inwe ezi nucleus na akụkụ ahụ dị iche iche pụrụ iche. Otú ọ dị, e nwere dị iche iche akụkụ nke sel na nke ọ bụla n'ime ha nwere ọrụ dị iche iche.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akụkụ dị iche iche nke cell yana ihe bụ isi ihe dị iche n'etiti cell anụmanụ na cell osisi.
1 akụkụ nke cell
1.2 cytoplasm na akpụkpọ ahụ plasma
1.3 Endoplasmic reticulum na Golgi ngwa
1.4 Centrosome, cilia na flagella
1.5 mitochondria na cytoskeleton
2 Esemokwu dị n’etiti ụmụ anụmanụ na mkpụrụ ndụ
Ọ bụ organelle ọkachamara na nhazi na njikwa ozi ekwentị. Mkpụrụ ndụ Eukaryotic na-enwekarị otu nucleus, mana enwere ihe ndị ọzọ ebe anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ nuclei. Ọdịdị nke akụkụ ahụ a dịgasị iche iche dabere na cell ọ dị na ya, ma ọ na-adịkarị gburugburu. A na-echekwa mkpụrụ ndụ ihe nketa n'ime ya n'ụdị DNA (deoxyribonucleic acid), nke na-ahụ maka ịhazi ọrụ nke cell: site na uto ruo n'afọ. Enwekwara ihe a na-ahụ anya n'ime oghere a na-akpọ nucleolus, nke a na-emepụta site na ntinye nke chromatin na protein. Selụ nke anụ mammalian nwere 1 ruo 5 nucleoli.
cytoplasm na akpụkpọ ahụ plasma
Akpụkpọ ahụ plasma bụ ihe owuwu nke gbara sel gburugburu ma dị na sel niile dị ndụ. Ọ bụ ya na-ahụ maka ikpuchi ọdịnaya ndị a na ichekwa ha na gburugburu mpụta. nke a apụtaghị na ọ bụ akpụkpọ ahụ na-emechi emechi ebe ọ bụ na o nwere pores na akụkụ ndị ọzọ nke ụfọdụ ụmụ irighiri ihe ga-esi na ya gafere iji mezuo usoro n'ime nke cell anụmanụ.
Cytoplasm nke mkpụrụ ndụ anụmanụ bụ oghere dị n'etiti akpụkpọ ahụ cytoplasmic na nucleus, nke gbara akụkụ ahụ niile gburugburu. Ihe mejupụtara ya bụ 70% mmiri ma ndị ọzọ bụ ngwakọta nke protein, lipids, carbohydrates na salts mineral. Nke a na-ajụ dị oké mkpa maka mmepe nke cell viability.
Endoplasmic reticulum na Golgi ngwa
Endoplasmic reticulum bụ akụkụ ahụ dị n'ụdị akpa gbawara agbawa na tubules ekpokọtara n'elu ibe ya, na-ekerịta otu oghere ime. A haziri reticulum n'ime mpaghara dị iche iche: reticulum endoplasmic siri ike, nke nwere akpụkpọ ahụ gbawara agbawa na ribosomes jikọtara ya, yana ezigbo endoplasmic reticulum, ọdịdị na-adịghị ahụkebe na enweghị ribosomes jikọtara ya.
Ọ bụ ihe nchịkọta tank dị ka membranes na-ahụ maka nkesa na nnyefe nke ngwaahịa kemịkal sitere na cell, ya bụ, ọ bụ etiti nzuzo nzuzo cellular. A na-eme ya dị ka mgbagwoju Golgi ma ọ bụ ngwa nke mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ ma nwee akụkụ atọ: akpa akpụkpọ ahụ, tubules nke a na-ebuga ihe na-abanye na cell, na n'ikpeazụ vacuole.
Centrosome, cilia na flagella
Centrosome bụ njirimara nke mkpụrụ ndụ anụmanụ ma bụrụ ihe owuwu cylindrical nwere oghere nwere centrioles abụọ. ndokwa perpendicular ọ bụla ọzọ. Ihe mejupụtara akụkụ ahụ a bụ protein tubules, nke nwere ọrụ dị oke mkpa na nkewa sel ebe ha na-ahazi cytoskeleton ma na-emepụta spindle n'oge mitosis. Ọ nwekwara ike ịmepụta cilia ma ọ bụ flagella.
Cilia na flagella nke mkpụrụ ndụ anụmanụ bụ ngwa mgbakwunye nke microtubules mepụtara nke na-enye sel mmiri. Ha dị n'ime ihe ndị dị n'otu akụkụ ma na-ahụ maka mmegharị ha, ebe n'ime sel ndị ọzọ, a na-eji ha kpochapụ ọrụ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ mmetụta uche. N'ọnụ ọgụgụ, cilia na-aba ụba karịa flagella.
mitochondria na cytoskeleton
Mitochondria bụ organelles na sel anụmanụ ebe nri na-abata na a na-atụgharị ha n'ime ume n'usoro a na-akpọ iku ume. A na-agbatị ha n'ụdị ma nwee akpụkpọ ahụ abụọ: akpụkpọ anụ dị n'ime apịaji ka ọ ghọọ cristae na akpụkpọ anụ dị n'èzí. Ọnụ ọgụgụ nke mitochondria dị na sel ọ bụla na-adabere na ọrụ ha (dịka ọmụmaatụ, na mkpụrụ ndụ akwara, a ga-enwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mitochondria).
Iji mezue ndepụta nke akụkụ bụ isi nke mkpụrụ ndụ anụmanụ, anyị na-ezo aka na cytoskeleton. Ihe mejupụtara ya bụ eriri filament nke dị na cytoplasm na, na mgbakwunye na ọrụ ya nke ịkpụzi mkpụrụ ndụ, ọ nwekwara ọrụ nke ịkwado akụkụ ahụ.
Esemokwu dị n’etiti ụmụ anụmanụ na mkpụrụ ndụ
Enwere ụfọdụ isi ihe dị iche na akụkụ nke ma anụmanụ ma cell osisi. Ka anyị hụ ihe bụ isi ndịiche bụ:
Mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ O nwere mgbidi cell n'èzí akpụkpọ ahụ plasma nke anụ ahụ na-enweghị. Ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ mkpuchi nke abụọ na-ekpuchi ya nke ọma. Mgbidi a na-enye ya nnukwu isi ike na nchebe ka ukwuu. Ihe mejupụtara mgbidi a bụ cellulose, lignin na ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ akụkụ mgbidi cell nwere ụfọdụ ngwa na ntọala azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'adịghị ka mkpụrụ ndụ anụmanụ, cell plant nwere chloroplasts n'ime. Chloroplasts bụ ndị nwere pigments dị ka chlorophyll ma ọ bụ carotene bụ ihe na-enye ohere ka osisi na-ese foto.
Mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ nwere ike imepụta nri nke ha n'ihi ụfọdụ ihe ndị na-adịghị ahụkebe. Ha na-eme nke a site na mkpirisi nke photosynthesis. A na-akpọ ụdị nri a autotrophic.
N'aka nke ọzọ, mkpụrụ ndụ ụmụ anụmanụ enweghị ikike iji mepụta nri nke aka ha site n'ihe ndị mejupụtara nri. Ya mere, nri ya bụ heterotrophic. Immụ anụmanụ ga-etinye nri nri dị ka anụmanụ ndị ọzọ ma ọ bụ osisi n'onwe ha.
Mkpụrụ ndụ osisi na-enye ohere ịgbanwe ike kemịkalụ n'ime ike n'ime anyanwụ ma ọ bụ ike ọkụ ekele maka usoro nke photosynthesis.
Na mkpụrụ ndụ anụmanụ, mitochondria na-enye ike.
Cytoplasm nke mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ na-eji nnukwu vacuoles na 90% nke oghere. Mgbe ụfọdụ enwere naanị otu nnukwu oghere. Vacuoles na-echekwa ngwaahịa dị iche iche na-esite n'oge metabolism. Na mgbakwunye, ọ na-ewepụ ihe dị iche iche n'efu na-eme n'otu mmeghachi omume metabolic. Selụ anụmanụ nwere oghere mana ha pere mpe ma ha anaghị ewe oke ohere.
Na mkpụrụ ndụ anụmanụ anyị na-ahụ organelle na a na-akpọ centrosome. Ọ bụ onye na-ahụ maka ikewa chromosomes iji mepụta mkpụrụ ndụ nwa nwanyị, ebe n'ime mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ, ọ dịghị akụkụ ahụ dị otú ahụ.
Mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ nwere ọdịdị prismatic, ebe mkpụrụ ndụ anụmanụ nwere ụdị dị iche iche.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere akụkụ nke cell na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » akụkụ nke cell